News | दीपिका
News | Tag: दीपिका
अभिनेत्री दीपिकाको रोचक जीवनशैली !
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री दिपिका पादुकोणको जन्म सन् १९८६, जनवरी ५ मा डेनमार्कमा भएको थियो । उनले बैगलोर स्कुलमा पढेकी थिइन् । उनले प्रि विश्वविद्यालयको पढाइ भने माउन्ट कार्मेल कलेजबाट गरेकी थिइन् ।
बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री दीपिका पादुकोणको सम्पत्ति कति ?
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री दिपिका पादुकोणको जन्म सन् १९८६, जनवरी ५ मा डेनमार्कमा भएको थियो । उनले बैगलोर स्कुलमा पढेकी थिइन् । उनले प्रि विश्वविद्यालयको पढाइ भने माउन्ट कार्मेल कलेजबाट गरेकी थिइन् । बलिउडमा स्थापित नायिकाको रुपमा परिचीत उनले मोडलिङमा लागेपछि भने पढाइलाई निरन्तरता दिन भने सकिनन् ।
अभिनेत्री दीपिकाबारे रोचक कुराहरु
ड्रग्स केशः दीपिकाको जबाफले आश्चर्यचकित भएका थिए एनसिबीका अफिसरहरु
एजेन्सी । बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री दीपिका पादुकोणको नाम पछिल्लो समय ड्रग्स केशमा मुछिएको छ । यो केशलाई लिएर उनलाई एनसिबीले एकपटक सोधपुछ समेत गरिसकेको छ । उक्त सोधपुछलाई लिएर धेरै समाचारहरु पनि बाहिर आइसकेका छन् ।
बलिउड ड्रग्स केशः एनसिबीले सोधपुछ गर्दा दीपिका बारम्बार रोएपछि...
एजेन्सी । शनिबार तीन बलिउड अभिनेत्रीहरूका लागि भारी दिन रह्यो । एकातर्फ एनसीबीले एक्शन मोडमा दीपिका, सारा र श्रद्धालाई सोधपुछ गर्यो भने अर्कोतर्फ दीपिका सारा र रकुलको मोबाइल पनि जफत गरियो।
अभिनेत्री दीपिका पादुकोणलाई फ्यानहरुले यसरी गरिरहेका छन् ट्रोल (फोटोफिचर)
एजेन्सी । पछिल्लो समय ड्रग्स केशमा नाम मुछिएपछि अभिनेत्री दीपिका पादुकोण सामाजिक सञ्जालमा ट्रोलको शिकार भएकी छन् । रिपोर्टका अनुसार उनले च्याटमा ड्रग्सबारे सोधेको टिप्पणी भएको थियो ।
ड्रग्स केशमा दीपिका पादुकोणसँग सोधपुछ गर्दै एनसिबी
एजेन्सी । बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री दीपिका पादुकोणको नाम ड्रग्स केशमा मुछिएपछि आज एनसिबीले उनीसँग सोधपुछ गर्दै रहेको छ । मिडिया रिपोर्टका अनुसार उनी लगायत अन्य अभिनेत्रीहरुलाई पनि एनसिबीले सोधपुछ गर्ने तयारी गरिसकेको छ ।
अभिनेत्री दीपिका पादुकोण आगामी वर्ष केही ठूलो फिल्मका साथमा सिल्बर स्क्रिन्समा देखिदैछन् । जसमध्ये दीपिकाको श्रीमान अर्थात अभिनेता रणवीर सिंहसँगको फिल्म ‘८३’ पनि हो । दीपिका रणवीर सिंहको जोडीलाई बलिउडमा खुब रुचाइएको छ ।
ब्याडमिन्टन खेलाडी बन्दै दीपिका !
अभिनेत्री दीपिका पादुकोण कपिल देवको जीवनमा आधारित फिल्म ‘८३’मा देखिन लागेकी छन् । साथै उनले एसिड अट्याक सरभाइवर लक्ष्मी अग्रवालको बायोपिक ‘छपाक’को सुटिङ पनि सकिसकेकी छन् । त्यसोत, जानकारी अनुसार अभिनेत्री दीपिकाले एक अन्तर्राष्ट्रिय च्याम्पियनको बायोपिकमा पनि काम गर्न सक्नेछन् ।